I-Thornbank Cottage-yonwabile kwaye ilula, abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya KULUNGILE
I-Thornbank yindawo eyomileyo nelula eyenziwe ngamaplanga eyakhiwe kwindlwana yeeholide kumbindi welali yaseBraemar. IParagliding, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukutyibilika, ukuhamba okanye mhlawumbi iholide yokuphumla kunye nendalo? Apha ungazibandakanya kuyo yonke imisebenzi enokunikelwa yi-Upper Dee Valley kunye ne-Cairngorms National Park, emva koko ubuyele kwindawo epholileyo kunye nekhaya.
Sibekwe embindini welali, kodwa sibekwe ngasemva kwendlela kwindawo ezolileyo enehlathi ngasemva.
I-cottage yaqala malunga no-1890. Igumbi lokuhlala linendawo yokutshisa i-log epholileyo kwisifuba esidala setshimini, kunye nedesika encinci yokubhala. I-Thornbank incinci kodwa ikhululekile, ilala 4 kwaye inayo yonke into oyifunayo kwikhefu kude noxinzelelo lwemihla ngemihla.
Nceda uqaphele ukuba akukho TV okanye i-wifi (ngokuqhelekileyo kukho i-4G yesiginali yeselula kwidolophana).
Ngaphandle, kukho ishedi yokugcina iibhayisekile zeentaba okanye ezinye izixhobo zangaphandle, i-BBQ, kunye nomgodi womlilo egadini.
I-Braemar inevenkile enkulu ye-Co-Op kunye ne-ofisi yeposi, ibhula, igaraji/isikhululo samafutha, ikhemesti, izixhobo zemidlalo ezisezintabeni nevenkile yempahla, umatshini wemali kunye noluhlu lweekhefi, iindawo zokutyela kunye neevenkile zobugcisa/zobugcisa. Kwindawo yokuthambisa, i-Fife Arms inabo bonke ubunewunewu obunokuthi ihotele ye-5-star inokunikela ... Ehlotyeni, ukutyelela amaqela ombhobho adlala kwidolophana kwiimini ezininzi zangoMgqibelo.
Siza kukuthumela imiyalelo epheleleyo yokuhlala kwakho, kwaye izitshixo zinokuthathwa kwi-cottage. Siphila malunga neyure yokuhamba kwaye siya kufumaneka xa kukho naziphi na iingxaki ezingalindelekanga. Ukuba neeparaglider ezibhabhayo kwindawo iminyaka eliqela, sinokunika iingcebiso zasekhaya kubaqhubi beenqwelomoya abandwendwelayo (kodwa nceda uqaphele ukuba asinikeli sikhokelo esisemthethweni okanye isifundo).
Siza kukuthumela imiyalelo epheleleyo yokuhlala kwakho, kwaye izitshixo zinokuthathwa kwi-cottage. Siphila malunga neyure yokuhamba kwaye siya kufumaneka xa kukho naziphi na iingxa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Braemar